သစ္စာအလင်း: မြေဇင်းတရားအားထုတ်နည်း အတွေ့အကြုံများ-အရှင်တိက္ခဉာဏာလင်္ကာရ
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 12:32 AM
Allow us to post in the FB.
International Bawdi AyeYeikThar said...
Allow us to post at MyayZin Dhamma FB page.
ဟုတ်ကဲ့ ယူပါ။ ကျွန်မလည်း ဗောဓိအေးရိပ်သာ ရဲ့ အင်္ဂလိပ်လို မျှဝေမှုတွေကို အလျဉ်းသင့်ရင် အသုံးပြုလိုပါတယ်။
Yes, why not! Glad to be shared again anytime anywhere.